लकडाउन खुकुलो हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने खतरा : डा. पाण्डे – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लकडाउन खुकुलो हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने खतरा : डा. पाण्डे
काठमाडौं- जनस्वास्थ्यविज्ञ डा रवीन्द्र पाण्डे लकडाउन खुकुलो बनाइँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कोरोना संक्रमणको जोखिमबारे सचेत रहन सुझाव दिएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन- आजको काठमाडौंको ट्राफिक जाम तथा घुमफिर डरलाग्दो छ । डेढ महिनाभन्दा लामो लकडाउनको अर्थ अब रहेन ।
दुवै सदनका सांसद, संसद सचिवालयका कर्मचारी तथा बडीगार्डलाई PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि लकडाउन पूर्ण रुपमा खोलिएको छ । आज देखिएको भीडभाड र सुरक्षाकर्मीको मौनताले प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले उनीहरुलाई विशेष निर्देशन दिएको छ, लकडाउन खोल्नको लागि ।
छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमित बढेकोबढ्यै छन् । सिमानाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । भैरहवा लगायतका ठाउँमा भारतबाट कामदार नेपाल आएर निर्माणको काम आज सुरु भएको छ । यो अवस्था सायद नेपालका सबै सिमावर्ती जिल्लामा सुरु भएको छ ।
सरकारले काठमाडौंबासीको Random Sampling को आधारमा न्यूनतम ३०,००० जनाको PCR Test गरेर नेगेटिभ आएको भए लकडाउन केहि खुकुलो गर्न मिल्ने थियो । सिमाना १०० % शिल गरेर तथा सिमाबर्ती प्रत्येक जिल्लामा न्युनतम दश / दश हजारको दरले PCR Test गरेर सुरक्षित देखेको भए लकडाउनको मोडालिटी फेर्न मिल्ने थियो । कुनै जांच नगरि, पर्याप्त औषधि / उपकरणको ब्यबस्था नगरि, अन्य कुनै आकस्मिक तयारी नगरि तथा बिज्ञहरुको सल्लाह नलिइ मनगढन्ते रुपमा यसरी लकडाउन खोल्नु सरकारको गैह्रजिम्मेवारी कदम हो ।
अहिलेसम्म लकडाउनले घरभित्र रहेका संक्रमितहरु आजदेखि सडकमा आएका छन् । संक्रमित र स्वस्थ घुलमिल भएका छन् । आजको घटनाले गर्दा भोलिदेखि लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ । यस्तो घनाबस्तीमा कोरोना संक्रमण फैलियो भने यो नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्ने छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) ले लकडाउन नखोल्न सरकारलाई बारम्बार भनिरहेको, जुन र जुलाईमा नेपाल तथा भारतमा कोरोना संक्रमण उच्चबिन्दुमा पुग्ने बताएको तथा नेपालमा तीसौं हजार संक्रमित हुनसक्ने बताएको परिप्रेक्ष्यमा लकडाउनमा एकैपटक यो किसिमको लापरबाही हुनु निकै खेदजनक छ । भिजन भएका, देश र जनताको माया भएका, व्यक्तिगत स्वार्थ नभएका बिज्ञहरुको समिति बनाएर यस्ता निर्णय गरेको भए नेपाल जोखिमको मार्गमा जाने थिएन ।
सरकारले बस्तुस्थितिको मुल्यांकन गर्न नसकेपनि हामी जनताले परिस्थिति बुझ्नु जरुरी छ । सहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन हामी जनता जिम्मेवार बन्नुको बिकल्प रहेन । कृपया ! जरुरी काम बाहेक घरभित्र बस्नुहोला । हाम्रो सानो असावधानीले हामी, हाम्रो परिवार तथा समाज संक्रमित हुनसक्छ । अहिल्यै यो स्तरको लकडाउन खोल्ने बेला भएको छैन ।
सरकारले न्यून आय भएका बर्गलाई ठोस राहत दिएर लकडाउनलाई ब्यबस्थित गराउन जरुरी छ । मानबिय क्षति अपुरणीय हुन्छ । यो तथ्य सरकारले समयमै बुझोस् । जनस्वास्थ्यमाथि अल्पदृष्टिको कारण गम्भीर संकट नआओस ।
अन्त्यमा कोरोना भाइरसले ठूलो सानो, यो पार्टीको / त्यो पार्टीको, यो पदको / त्यो पदको भन्दैन । जनपक्षीय कुरा उठान गर्न पार्टीको घेरा नहेरौं । हामी सबै एकै डुंगामा छौं । डुंगा डुब्यो भने हामी सबै डुब्नेछौं !
सडकमा भेट्टिएका एक बालकले सन्दीपलाई भने, ‘तपाईँ सन्दीप लामिछाने जस्तै देखिनुहुन्छ’
पछाडीबाट खरेल ठूलो स्वरमा कराउँदै थिए : ‘यस्तो घुस्याहा हाकिमकहाँ छाती तन्काउन गइन्न
काठमाडौं उपत्यकामै भित्रियो सलह, विज्ञले दिए यस्तो सल्लाह